OfficeSuite အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
11.8.37903 for Android
ဒေါင်းလုပ် XAPK（63.5MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် OfficeSuite - Word docs, Excel sheets, PDF files
သင်ဖတ်ရှုရန်, တည်းဖြတ်ခြင်း, Excel, PowerPoint နှင့် PDFs များကိုပေါင်းစပ်ပါ။ Mobile Devices များပေါ်တွင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုရန်အတွက်ရုံးခန်းများအတွက်အချမ်းသာဆုံးနှင့်အများဆုံးတပ်ဆင်ထားသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။ အမျိုးမျိုးသောဖိုင်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးနှင့်သဟဇာတ - Microsoft Office 365 စာရွက်စာတမ်းများ, Google Docs, OpenOffice နှင့်အခြားအရာများနှင့်သဟဇာတ။
Word Docs, Excel စာရွက်များ, powerpoint slides နှင့်အခြားသူများကိုတည်းဖြတ်ပါ။ ဒါ့အပြင်သင် PDF converter နှင့်အလွယ်တကူအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ သင်၏ Google Drive အကောင့်သို့မဟုတ် Oneedrive, Box သို့မဟုတ် Dropbox အကောင့်များကိုချိတ်ဆက်ပါ။
Mobile Docors Edits Word Docs အတွက် Excel Speclesheets & Provalipspreets နှင့် PowerPreet Slides များနှင့် powerprepreets နှင့် powerprepreet slides များနှင့်အတူထုပ်ပိုးထားသောအစွမ်းထက်သော applications များနှင့်အတူထုပ်ပိုး မည်သည့်ဖိုင်အမျိုးအစားမဆို format - Microsoft Office365 Docs, Google Docs, OpenSoffice နှင့်အခြားအရာများ - စာဂိတ်ပန်းချီကား, Export Word Docs, Excel စာရွက်များ, PDF သို့ PDF သို့ PDF သို့ဆ လိုက်. •အဆင့်မြင့်လုံခြုံရေးရွေးချယ်စရာများ။ •သင်၏ဖိုင်များကိုသင်၏ဖိုင်များကိုသင်၏ Google Drive အကောင့်သို့မဟုတ် OneDrive, box သို့မဟုတ် dropbox အကောင့်များပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းပါ။
Advanced PDF စီမံခန့်ခွဲမှု
PDF DocHer ။ • PDF ဖိုင်အယ်ဒီတာ။ • PDF ဖိုင်တွဲများ။ • PDF ဖိုင်များဖြည့်စွက်ခြင်း။ PDF စာရွက်စာတမ်းများ။ •တိုးမြှင့်ထားသောလုံခြုံရေးနှင့်ခွင့်ပြုချက်စီမံခန့်ခွဲမှု Go
•ပေါင်းစည်းထားသော cloud သိုလှောင်မှုဖိုင်များကိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် 5GB အခမဲ့ရယူပါ။ သင်၏ Google Drive, OneDrive, box သို့မဟုတ် Dropbox အကောင့်များကိုချိတ်ဆက်ပါ။
သင်၏ Android နှင့် iOS မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအားလုံးနှင့်အတူ Windows PC Office Mobile Pack နှင့်အတူ။
• Microsoft Docs, Google Docs, OpenOffice, Apple ၏ iWork နှင့် Apple ၏ iWork နှင့် alled နောက်ဆုံးပေါ် Android version အတွက် interface ကိုအကောင်းဆုံး။
• PDF အယ်ဒီတာကို PDF ဖိုင်များဖန်တီးရန်သို့မဟုတ်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့် PDF ဖိုင်များကိုဖွင့်ရန်နှင့်ဖြည့်ရန် PDF converter တစ်ခုအဖြစ်ဖွင့်နိုင်သည်။
Mobile Docitors edits ords order doc docs ည့်သည်များအတွက်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုမည်သည့်ကုဒ်တွင်မဆိုအမျိုးအစားတွင်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါ။ သင်လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းစာရွက်စာတမ်းများကို ဖန်တီး. တည်းဖြတ်ရန်သင်သွားသည့်နေရာတိုင်းတွင်သင်၏ Office Mobile Package ကိုယူပါ။
အခမဲ့7ရက်ကြာရုံးတင်စစ်ဆေးမှုကိုစတင်ပါ။ စာရွက်စာတမ်းများအယ်ဒီတာနှင့်အခြားအဆင့်မြင့်ကိရိယာများနှင့်အင်္ဂါရပ်များအပါအ0င်ရုံးခန်းများအားလုံးကမ်းလှမ်းရမည့်အရာများကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ သင်ရသည့်အတိုင်းသင်ရရှိသောအရာသည်သင်၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောလစဉ်နှင့်နှစ်ပတ်လည်စျေးနှုန်းအစီအစဉ်များကသင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်မှန်ကန်သောဖြေရှင်းချက်ကိုရွေးချယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
Mobile Docors Word Docs အတွက် Wordlipps & PowerPoint Slides နှင့် PDF ဖိုင်များအတွက် PDF ဖိုင်များအတွက်။
သင်၏မိုဘိုင်းရုံးကိုသင်၏ Google Drive အကောင့်သို့မဟုတ် OneDrive, box သို့မဟုတ် dropbox သို့ချိတ်ဆက်ပါ သင်၏ဖိုင်များအားလုံးကိုသိမ်းဆည်းရန်အကောင့်များ။ ဖိုင်တွဲများ - Google Docs, OpenOffice, OpenOffice, Microsoft Office 365 စသည်တို့ပါ0င်သည်။
PRIMIFIRE အတွက် 50GB သိုလှောင်ခြင်း။ 20 အဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည်
Mobile Devices2ခုနှင့် Windows PC တွင်ပရီမီယံကိုသုံးပါ။ •ကြော်ငြာများမရှိပါ• ဦး စားပေးအထောက်အပံ့
ဘာအသစ်လဲ OfficeSuite - Word docs, Excel sheets, PDF files 11.8.37903
•	OfficeSuite now targeting Android 11.
•	Enjoy unobstructed navigation through tabs, regardless of your current selection.
•	View and reuse recently used colors and themes in Color picker.
•	You can now startaSlideshow directly from the View mode.
SANEETS - Unbox Review
ConvertaPDF Document to Microsoft Word / Libreoffice Writer Pages or any other Office Suite.
Pyae Phyo thaw